UBrendan McKay waseTampa Bay ubonelela ngesakhelo soMdlali weendlela ezimbini uShohei Ohtani akanakuze aphumelele. - Mlb
UBrendan McKay waseTampa Bay ubonelela ngesakhelo soMdlali weendlela ezimbini uShohei Ohtani akanakuze aphumelele.
NgoMgqibelo ebusuku, iProjekthi yeShohei Ohtani ifikelele kwinqanaba elikhulu. Akunjalo ngenxa yayo nayiphi na into eyenziwa ngu-Ohtani ngokwakhe, kodwa ngenxa yokuba i-Tampa Bay Rays yeendlela ezimbini uBrendan McKay wafumana incasa yakhe yokuqala yesenzo esikhulu seligi. IiRays, zityibilika kugqatso lwe-AL East kunye noTyler Glasnow kwi-IL kunye noBlake Snell kwi-skids, babiza i-rookie ukuba benze ubuncinci baqale kabini, mhlawumbi ngaphezulu ukuba iphosa kakuhle.
Ukuza kuthi ga ngoku, kuhle kakhulu kumfana oneminyaka engama-23 ubudala waseDarlington, ePennsylvania: Kwisiqalo sakhe, uMcKay uthathe umdlalo ogqibeleleyo kwi-inning yesithandathu kwaye wawushiya umdlalo emva kwama-innings amathandathu ebhola engenamanqaku, enye. Ude wayimisa kakuhle indawo yakhe: Xa uJoey Gallo wayikhuphela phezulu ibhola ngokuchasene nokutshintsha ukuya kwicala lasekhohlo lebala, uMcKay wankcunkca waya kwisiseko sesithathu ukuze ayilandele.
Saxelelwa* ukuba lo mfo angayenza yonke into. #RaysUp
— Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) NgoJuni 29, 2019
UMcKay ukwanakho ukurhoxa ababethayo ngeendlela ezithe chatha, ngesantya esilungileyo sebhola ekhawulezayo yomyalelo osekhohlo kunye nokhethekileyo kuye nabani na, ngesilayida esidibanisayo ukuze aqale.
Ukusukela ngoku, uya kwaziwa njengoBrendan McK. #RaysUp
Kodwa iiRayi azilindelanga nje ukuba uMcKay abe yihayi yabo. 4 qala phantsi ukolula kunye ne-shag bloopers ngokuchasene ne-shift; nabo balindele ukuba abethe.
UBrendan McKay nguye @MLBPipeline 's No. 5 LHP ithemba kunye
*ethe ntsho ngamanqaku*
No. 1 isiseko sokuqala ithemba?
mn timberwolves ujimmy umngcamli
— Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) NgoJanuwari 20, 2018
Okwangoku, u-Ohtani nguye kuphela umntu kwiminyaka eyi-100 edlulileyo ukuba abe ngumbutho omkhulu oqhelekileyo epleyitini nasendulini ngexesha elinye. Asazi ukuba abanye banokulandela ekhondweni lakhe banikwe ithuba lokukhula babe ngabadlali abahlukeneyo kwasekuqaleni kwekhondo labo. Impumelelo okanye ukusilela kukaMcKay kulo mzamo kuya kuhamba umgama omde ekuphenduleni lo mbuzo, kwaye ngaloo ndlela unokuphelisa ukuba nefuthe kubadlali bandlela-mbini bexesha elizayo nangaphezu kwe-Ohtani.
UMcKay wayeyinombolo. I-4 ikhetha kwidrafti ye-2017 ngaphandle kweYunivesithi yaseLouisville, apho wayengumdlali wesizwe esivumelanayo sonyaka njengomncinci. Akazange nje uMcKay athumele umsebenzi we-2.65 ERA waza wabetha ama-391 ama-391 kwi-315 1/3 i-career innings e-Louisville, wabetha .328 / .430 / .536 kwiisizini ezintathu ze-collegiate, kubandakanywa ne-.341 / .457 / .659 ukuhamba kunye ne-18 ibaleka ekhaya kwimidlalo engama-64 kunyaka wakhe woyilo.
Xa iiRays ziqulunqa uMcKay, zenza inqaku lokumazisa njengomdlali weendlela ezimbini, kwaye phantse kwiinyanga ze-25 kamva, umdlali weendlela ezimbini uhlala. Umphathi weRays UKevin Cash uxelele iintatheli ungalindeli uMcKay ukuya kwi-DH rhoqo phakathi kweqela lakhe lokuqala elikhulu lokuqala, kodwa wathi uMcKay mhlawumbi uya kubona isenzo njenge-pinch hitter kuhambo lwakhe lokuqala ukuya kumboniso. (UMcKay udlale isiseko sokuqala ekholejini kunye neminyaka yakhe yokuqala emibini ebantwaneni, kodwa akakayidlala ibala ngo-2019.)
Ngelixa amandla ka-Ohtani okudlala zombini iindlela kwibhola yobuchwephesha kuye kwamenza i-intercontinental superstar, uMcKay wayeyindlalifa yamva nje kwisithethe sexesha elide sabadlali beendlela ezimbini kwibhola ye-NCAA. UBrandon Belt, uAndrelton Simmons, kunye noBuster Posey bonke badlale zombini iindlela ekholejini. Kwenze njalo umva weTampa Bay Buccaneers uJameis Winston. Kwiminyaka emithathu ngaphambi kokuba uMcKay aphumelele iGolden Spikes, eKentucky A.J. UReed ugoduke nebhaso lebhola ekhatywayo lebhola ekhatywayo likhulu emva kokukhokela i-SEC ekuphumeleleni nasekubalekeni ekhaya kwangaloo nyaka. I-Astros yathatha iReed kunye ne-42nd pick kwi-draft ye-2014, emva koko yasebenzisa ukhetho lwabo olulandelayo kwi-J.D. Davis yaseCal State Fullerton, eyayine-16 kabini kunye nesixhenxe esigciniweyo njengejunior. Kwanele ukuthi, kukho inqwaba yabadlali beendlela ezimbini abasasazeke kwii-majors.
U-Shohei Ohtani ubuyile-kwaye ne-DH enomdla kakhulu kwi-Baseball
Uninzi lwabalandeli abazi ukuba iiklabhu ze-MLB zikhasa ngokufanelekileyo ngabadlali abahlukeneyo kuba kuninzi lwamatyala, iqela eliyila umdlali onjalo likhetha ukuba yeyiphi kwezi ndlela zimbini aza kudlala ngayo, okanye imvumele ukuba enze ukhetho. yena ngokwakhe. Kwidrafti ye-2017 yodwa, uMcKay wayengomnye wabadlali abathathu beendlela ezimbini kwiindawo ezikhethiweyo ezisixhenxe. U-Hunter Greene, oye wesibini kwi-Reds, wayekwinqanaba eliphezulu le-shortstop, kodwa ugxunyekwe kuphela kwibhola ye-pro, kwaye akazange adlale umdlalo wobuchwephesha kwi-shortstop. No. 8 pick Adam Haseley wenza iqalo ezintlanu kwintshatsheli yesizwe uVirginia Cavaliers njengomntu omtsha kwi-2015, emva koko wathumela i-1.73 ERA njenge-sophomore, kodwa emva kwemidlalo ye-200 yobuchwephesha kwi-outfield, u-Haseley akakaphosi i-pitch yobungcali.
Isizathu sokuba kwabona abona bakhasayo bendlela-mbini bajike babe ngabadlali bendlela enye silula: Kunzima ngokwaneleyo ukuphuhlisa umdlali omncinci kwaye umgcine esempilweni xa enikela zonke iireps zakhe kwicala elinye lebhola. Ukuphuhlisa umdlali wamacala amabini kukwafuna ukuba umdlali abe kwinqanaba elifanayo lophuhliso njengabo bobabini obetha kunye ne-pitcher; ukuba ungumntu obetha inqanaba elinye kodwa ukwinqanaba lesithathu le-A-pitcher, akukho ndlela yokumfumana aphinde abuye kuzo zombini izikhundla ezicela umngeni kuye ngaphandle kokumoyisa.
Uninzi lwexesha, isethi enye yesakhono ikude kakhulu kunomnye ukuba ukhetho lucacile. UGreene, umzekelo, weza exhobe nge-102 mph ekhawulezayo, isipho esinqabileyo kakhulu ukuba abeke emngciphekweni wokungcoliswa nguHail Mary adutyulwe ngokumenza adlale ixesha elifutshane. U-Haseley, ngokuchaseneyo, akazange aphose nzima ngokwaneleyo ukuba abe lithemba lokuphosa elibukhali kodwa wayengumdlali wekholeji ophucukileyo okwaziyo ukuhamba ngokukhawuleza kubantwana, ngoko ke iiPhillies azizange zizikhathaze ngokumzama endulini.
U-Ohtani wakwazi ukuba yi-hitter yezinga lehlabathi kunye ne-pitcher ngenxa yezizathu ezibini: Okokuqala, inqanaba eliphezulu le-baseball yaseJapan, i-NPB, ingcono kunama-American minor leagues kodwa ayilungile njenge-MLB. Oku kuthetha ukuba u-Ohtani wakwazi ukuphumeza olo lungelelwaniso lungenakuthelekiswa nanto, ejongene nokhuphiswano olwaneleyo ukuze acele umngeni kuye njengoko wayephuhla kodwa hayi kakhulu kangangokuba kwammoyisa. U-Ohtani akazange aphume esibelekweni ebetha iihomer eziziimitha ezingama-450 kwaye ephosa kuma-90 aphezulu: Kwafuneka afunde indlela yokukhuphisana nabadlali ababalaseleyo kwilizwe lakhe. Njenge-rookie eneminyaka eyi-18 ubudala, u-Ohtani wabetha nje .238 / .284 / .376 kwaye wathumela i-4.23 ERA ngelixa ebetha nje i-46 ngokuchasene ne-33 ehamba nge-61 2/3 innings. Kodwa i-NPB yayingekho kude kangako phezu kwentloko yakhe macala omabini ebhola kangangokuba u-Ohtani wanyanzelwa ukuba akhethe ngokukodwa ilulwane elingumzekeliso.
Inqanaba eliphantsi lokhuphiswano libuye lanika i-Nippon-Ham Fighters, iklabhu ye-NPB ye-Ohtani, ngakumbi inkuthazo yokumhlakulela njengomdlali weendlela ezimbini. Kunyaka ophelileyo, u-Ohtani wayene-wRC + yesibhozo phakathi kwe-MLB hitters kunye ubuncinane be-300 yepleyiti yokubonakala kunye ne-29th-best ERA- phakathi kokuqalisa i-pitchers ubuncinane be-50 innings. Ukufumana i-top-10-ish hitter kunye ne-top-30-ish yokuqalisa ingqayi kwindawo enye yoluhlu lubhukuqelo (njengoko i-freakout yonyaka ophelileyo malunga no-Ohtani ingacebisa), kodwa ukuba nokudubula kwangaphandle kweyona meko ingcono kunokubakho. ungafanelanga ukubeka esichengeni esinye sezo ziphumo ukuzama ukuzifumana zombini. Ukuba neyona ngqayi ibalaseleyo yokuqala kwiligi kunye neyona DH ilungileyo kwiligi kwindawo enye yoluhlu ( yindlela abavoti bePacific League Best Nine Awards abajonga ngayo i-Ohtani kwi-2016 )? Oko kuwufanele umngcipheko wophuhliso wokuba ukulandela indlela mbini kubantwana kunokulimaza uphuhliso lwethemba kwicala lakhe elomeleleyo. Okanye, ngalo mbandela, mveze kumngcipheko owongezelelweyo wokwenzakala; U-Ohtani bubungqina baloo nto ngokwakhe-i-offseason u-Tommy John utyando lwabiza inyanga yokuqala ye-2019 ye-2019 kwi-plate kwaye iya kuxabisa yonke i-2019 isizini endundumeni.
Okwesibini, ngumdlali onesiphiwo esimangalisayo. Ukuba kukho omnye umntu emhlabeni onamandla engalo yokujula ibhola ekhawulezayo ye-101 mph, i-finesse ukuyalela i-pitches yokwaphulwa kwe-multiple, ukulungelelaniswa kwesandla neliso ukubetha .300 ngomonde kunye namandla, kunye nesantya sonyawo ukuposa kabini- idijithi ebiweyo isiseko iyonke kwisiqingatha sonyaka, Andazi ngaye.
UMcKay lithemba elihle kakhulu, kodwa akakho kwinqanaba lika-Ohtani. U-Ohtani mkhulu kunoMcKay. Unesixhobo esingcono sokubetha kunye namandla angaphezulu, uphosa ngamandla, kwaye ubaleka ngokukhawuleza. Ohtani nguthixo. UMcKay ungumntu onesiphiwo esikhethekileyo, ongakwaziyo ukujula kuphela kodwa uyalele iitewu ezine, onokubetha umndilili kunye namandla okuqalisa.
ii-oscars 2018 ukuvota okuprintwayo
Umntu ofayo nangona enokuba unjalo, uMcKay uphume ekholejini ephucuke ngendlela ebalaseleyo njengomdlali obethayo kunye nomdlali wesikhundla kwaye enethuba elisemthethweni lokuphumelela. Akunjalo kuninzi lwabadlali beendlela ezimbini abadibeneyo. Ndabona uMcKay ephila njengomntu osanda kuzalwa kwaye ndamfumana enomtsalane ngendlela emangalisayo njengengqayi; wajula i-6 1/3 i-no-hit innings ngokuchasene neqela eliphezulu le-10 laseFlorida State elitshise umjikelo wokuqala uKyle Funkhouser ngobusuku obungaphambili. Kodwa njengomdlali wesikhundla, wayengumntu wokuqala onxibelelana naye owayengenawo amandla amaninzi, kwaye ayisiyiyo iprofayile enomtsalane. Ukuba uMcKay wayeyidrafti efanelekile kwi-2015, wayeya kuba yi-pitcher yexesha elizeleyo ngoku. Kodwa ngo-2017, uMcKay waphuhlisa istrowuku yamandla, ebeka imiboniso yokuziqhelanisa nokunkcenkceshela kwamehlo kwaye waphantse wayiphinda kabini i-career yakhe ye-collegiate home run total; Xa wayejika ukuba yipro, uluvo lwahlukana ngakumbi okanye lungaphantsi malunga nokuba unokuba ngumntu obetha ngcono okanye obethayo.
Yithi Molo kwi-Ex-Rays: I-MLB's Tampa Bay-Montreal Split yiBold, Nonsensical Idea
UMcKay uye wasebenza ngcono njenge-pitcher kunokuba i-hitter kwibhola ye-pro; wathumela i-2.41 ERA kunye ne-103 yokuqhankqalaza kwi-78 1/3 i-innings kumanqanaba amathathu aphantsi-abancinci kwi-2018, eyayilindeleke kwithemba elinjalo. Ukuza kuthi ga ngoku ngo-2019, nangona kunjalo, ubengcono ngakumbi ngokuchasene nokhuphiswano olomeleleyo: 66 2/3 innings kwi-Double-A kunye ne-Triple-A, kunye nokubetha okungama-88 ngokuchasene nokuhamba nje okuli-15 kunye nemitsi elithoba ayifumeneyo.
Kwi-plate, uMcKay hit .214 / .368 / .359 ngo-2018 kwaye ubetha .205 / .313 / .331 kude kube ngoku kwi-2019, enokuthi ibonise ukuba akanako ukubetha kwi-pros. Kodwa inokuba sisiphumo sokuhamba kwakhe kubantwana ngokukhawuleza njengoko ingalo yakhe iya kumvumela, kwaye ilulwane lakhe alikhuli ngesantya esifanayo. Le ngxaki yongezwa kukuba uMcKay ukwishedyuli efana ne-Ohtani enciphisa ixesha lakhe lokudlala. Ngenxa yokuthelekisa, u-Haseley, owabetha uMcKay kwi-majors ngenyanga, wathatha i-981 encinci ye-league ukubonakala kwepleyiti ngaphambi kokuba abizwe, phantse ngokuphindwe kabini kuMcKay's 541. Ingalo yakhe ilungile kunokuba ilungile, kodwa i-bat yakhe idinga i-reps encinci yeligi. , kwaye akakwazi ukukhwela kwi-majors ngelixa eshiya i-bat yakhe e-Durham ukuze abambe.
Ukuba uMcKay akakwazi ukuxhoma njengomdlali weendlela ezimbini, siya kuba nobungqina obuninzi bokuba mhlawumbi kuthatha italente yakanye kwisizukulwana njengo-Ohtani ukukhupha eso senzo. Kodwa ukuba unako, oko kunokuphosa i-paradigm yophuhliso ye-baseball kwisiphithiphithi, kwaye abadlali abanjengoMcKay banokujongwa njengabadlali beendlela ezimbini ukusuka ekuqaleni, endaweni yabadlali bezikhundla abanokuthi bathathe induli kwaye batye i-inning kuqhushululu, njengeRanger encinci. Umdlali weligi uMat Davidson, okanye iingqayi ezinokucofa, njengoCincinnati kaMichael Lorenzen. Bobabini aba badlali bangene kwibhola bejonge ukuyibetha okanye kwipitch, kwaye kuphela emva kokubetha isilingi yabo kwinqanaba elinye lomdlalo apho babuyela ekudlaleni macala omabini.
UMcKay akanguye umbutho omkhulu osekiweyo kwindawo enye ezama ukungena kwenye; unethemba eliphezulu eliphuhliswayo njengomdlali weendlela ezimbini ukusuka ekuqaleni. Ngapha koko, inxalenye enkulu yenqanaba lakhe njengethemba livela kumandla akhe okudlala zombini iindlela. Ukuba uMcKay uyaphumelela, ibiya kuqinisa eminye imibutho ukuba ithathe amathuba ngokuphuhlisa amathuba aphezulu njengabadlali bababini.
IiRayi sele zithatha elo nyathelo lilandelayo. Kwi-2015, bachitha i-pick yesixhenxe kuJacob Cronenworth, owathi kwiminyaka emithathu kwiYunivesithi yaseMichigan hit .312 / .400 / .436 ngelixa edlala zonke izikhundla ezine ze-infield, kwaye wayenomsebenzi we-2.76 ERA kunye ne-27 igcina induli. I-Cronenworth i-6-foot-1 i-right-hand-hander eyaphosa kwi-90 ephantsi kwikholeji, inzima ngokwaneleyo ukuxhoma kwi-Big Ten, ngaphantsi kwe-AL East, kwaye ke iiRays ziye zamphuhlisa njenge-shortstop. Ngoku iminyaka eyi-25 ubudala, uCronenworth ubetha .343 / .431 / .552 kwi-Triple-A Durham kwaye yabizwa nje ngokuba yi-International League All-Star.
Uphinde wabuyela endulini ngo-2019 okokuqala kwiminyaka emine. Ibe yibhegi exubeneyo: Kwimidlalo emithandathu, uhambe ngaphezulu kunoko wabethwayo, kodwa useza kuvumela ukubaleka. kwaye uye waphosa ngamandla njengeekhilomitha ezingama-96 ngeyure . Mhlawumbi u-Ohtani ukhethekile kakhulu impumelelo yakhe ayikwazi ukuphindwa. Okanye mhlawumbi uzakudlala zombini iindlela uBabe Ruth awayezijiwulela ezicingweni, okanye uSteph Curry wayezakudubula abatsibayo beenyawo ezingama-28: italente ebalaseleyo eyayikhethekile bade abanye baqonda ukuba nabo bangenza into engenakwenzeka.
Utshintsho lomthetho we-mlb
iindaba eziphambeneyo zehlabathi
dildo kwicandelo lokuthanda ilizwe
Amaxesha aphezulu ama-10 abasindileyo
Ixesha le-atlanta 2 isiqendu 7